Inona no mahasamihafa ny Cannondale SuperSix sy SuperSix Evo? - Cannondale
Tena > Cannondale > Cannondale supersix geometry - ny fomba hahatratrarana
Cannondale supersix geometry - ny fomba hahatratrarana
Inona no mahasamihafa ny Cannondale SuperSix sy SuperSix Evo?
Ao amin'nyvaliny, nysupersix evomanana lanjany ambany raha oharina amin'nysupersix(naoty tsiaEVO). Na izany aza, ny tsyevony dikan-teny dia samy manana ny familiana sy ny fihazakazahana mihazakazaka. Mihoatra ny 20% ny hamafin'ny pedal ary ny hamafin'ny familiana 4% ambony noho nyevokinova.19 2013.
Mety ve ianao ny mankanesana eny, eny? - Hmm-mm. - Misaotra. Ho salama tsara aho mandritra ny fotoana fohy. (mihomehy) (mozika miakatra) Mety hanontany tena ianao hoe maninona i Bridgewood no mijoro eo amin'ny tetezana hazo any South Wales.
Eny, noho ny antony tsara. Ity no bisikileta nasionalin'ny Tompondakan'ny Firenena teo aloha, Dan Evans. Ary, tsara, mahatalanjona tokoa, sa tsy izany? Izy io dia Cannondale SuperSix EVO Hi-MOD, ary misy faritra maivana be dia be mba hahomby araka izay azo atao rehefa miakatra.
Dan mitaingina ny fitaovan'ny SRAM vonona amin'ny SRAM ary izany dia satria, iray amin'ireo vondrona maivana indrindra any izy, saingy tsy dia mahazatra loatra fa manana rojom-baravarana namboarina eo alohan'io izy fa tsy mpiorina peratra tokana ampiasan'ny mpihanika no tena malaza satria mamonjy lanja. Fa tian'i Dan ny fiasan'ny fananana peratra roa, ary manana peratra 39/53 izy izay mety hahagaga ny olona sasany satria bisikileta natao manokana ho an'ny fiakarana mideza tokoa io. re, tsara, maivana ary tsy misy dikany ary 995 grama isaky ny mpivady no heveriko fa ambany kilao ho an'ny kodiarana dia hazavana tokoa, saingy mila henjana ihany koa izy ireo, ary nilaza tamiko i Dan fa izany no izy.
Azo antoka fa tsy nampihena izany ianao taloha. Izy io dia manana kodiarana Vittoria Corsa G, izay noho ny fantsom-pitaovam-pitaterana dia manana fanoherana ambany dia ambany. Ary 23 milimetatra ny habeny eo aloha sy aoriana.
Ny sasany aminareo dia mety manontany tena hoe maninona i Dan no samy manana freins amin'ny bisikiletany. Ho an'ny British National Hill Climbs dia mila manana rafitra fanamoriana roa amin'ny bisikiletanao ianao. Ka raha mitaingina bisikileta mandeha tokana ianao dia afaka mivoaka miaraka amin'ny frein iray fotsiny, satria ny valizy tokana haingam-pandeha dia mihevitra ho mekanisma fanidiana hafa, ary ny bisikileta freewheel dia midika fa ny freins dia tsy maintsy mbola hipetaka sy hipetaka.
Betsaka ny pitsopitsony tena mahafinaritra amin'ity bisikileta ity. Kaita metatra, izany no zava-dehibe satria, mba hanafainganana ny ezaka ataonao amin'ny fiakarana lava. Ary i Dan dia manana metatra mandeha an-tongotra havia, crank, lafiny tsy mitondra fiara eto, tsara izany satria mahavonjy lanja be izany.
Ny metatra elektrika sasany dia afaka manampy lanja kely amin'ny bisikileta. Raha ny fotony no resahina dia manana an'io Deda Zero 100 marani-tsaina io izy izay 130 milimetatra ny halavany ary tsara tarehy ary manohitra ny endriny, izay 54 sentimetatra ny habeny. Mijanona miaraka amin'ny kobam-boaloboka, misy mpanelanelana blip kely eo am-pelatanany hahafahany miakatra amin'ny tampony, ary amin'ny maha-lohan-doha azy dia manana antsipiriany Garmin 820 izay tsikaritro fa i Dan dia iray amin'ireo CeramicSpeed ​​UFO- Has rojo vy izay tsy dia mahatalanjona amin'ny firakotra fotsy ihany, fa efa notsaboina manokana ihany koa mba hampihenana ny fikorontanan'ny drivetrain sy hamonjy watts sarobidy rehefa tena mampihena ny herinao ianao, indrindra fa ny fampihetseham-po mahery vaika ampiasain'i Dan rehefa miakatra izy.
Salama vaovao amin'ny tanky antsantsa
Ho an'ny pedal dia mitovy amin'ny Keo Blade Carbons izy, fa ireo no manokana miaraka amin'ny axes titanium izay mikorontana be. Ary maivana ireo, fa somary aero ihany koa, noho ny volavolan'ny lelany, ary tsy betsaka ny olona mahalala an'izany. Horaisiko ity bisikileta ity ary ho hitako fa mora izany.
Oh. (mihomehy) Hataoko amin'ny rantsan-tànana kely. Topazo maso izany ary esory koa ny fanamafisam-peo.
Fantatro fa handeha voanjo daholo ianareo raha tsy manao izany aho. (Hums Wheel) Toa tsara izany, tsy izany? Dan dia manana karbaona Selle Italia SLR Carbon ho an'ny lasely, ary nipoitra lavitra be teo amin'ny lalamby izy io, saddle tena maivana izy, ary angamba ho hitanao koa fa tsy manana tranom-bongo na bara vy ao anaty bisikileta i Dan. izany dia satria tsy mila misotro ireo fiakarana havoana fohy izay fanaon'i Dan ianao, miampy manana taratasy fametahana anarana kely mahafinaritra miaraka amin'ny sainam-pirenena Wales izy, saingy mieritreritra aho fa hahita antsipiriany vitsivitsy momba ny bisikiletan'i Dan, tokony anontanio i Dan tenany fa eo izy. Misaotra nampiseho anay ny bisikiletanao, Dan.- Tsy misy olana.- Mahafinaritra ny mahita anao, ka ohatrinona ny lanjan'ny bibidia ity? - Marina, ka amin'izao fotoana izao, raha ny marina, dia tonga amin'ny kilao dimy sy sasany. - Kodiarana faran'izay maivana izany, saingy kodiarana mahery kely kokoa, ary ny hazakazaka farany nataoko dia ny Taiwan KOM Challenge, ka tsy afaka nampiasa ny kodiarako mahery vaika mahazatra aho satria fantatrao fa mihazakazaka mihoatra ny 60K --- eny ny arabe somary marokoroko amin'ny toerana ihany koa - nahagaga ny lalana KOM fa teny an-dàlana dia tsy tena fantatrao izay antenaina.
Nandeha tany amin'ny Corsas fa tsy Corsa Speeds, mba haharetana kely fotsiny. - Mamonjy lanja kely eo izany. Misy fanovana vaovao ataonao amin'ny bisikileta hahafahana miakatra fiakarana na toerana avo amin'ny vanin-taona fiakarana havoana? - Ie, ka amin'ny trangan-javatra sasany rehefa tonga amin'ny vanim-potoana eny an-tendrombohitra dia hanao zavatra adala isan-karazany aho.
Esoriko ny kasety fantsom-by. Nametraka jiro jiro roa aza aho. Indraindray aho afaka mandeha amin'ny rojo vy tokana, na kavina boribory Cannondale 40- na 44-nify, izay manazava ny bisikileta.
Ampidiniko eo ambanin'ny 5 pounds fotsiny izany mba hanaovana ny fiakarana havoana fohy. Ary amin'ity lanja ity dia mbola masiaka izy, azo ovaina tanteraka, tena fitaovam-piadiana fotsiny. Manao izany safidy izany ve ianao? - Indraindray ianao dia manana havoana misy hantsana samy hafa ary mety ho fisaka tokoa ny manomboka sy miakatra amin'ny farany, na ny mifamadika amin'izany.
Afaka manomboka amin'ny tora-bato mideza izy ary avy eo mifarana amin'ny fizarana tailwind mendri-piderana eo an-tampony. Ka rehefa manana taranja toy izao ianao dia mila fitaovana marobe. Mila mahay mametraka azy ao anaty peratra lehibe ianao ary manaparitaka ny watts raha afaka mahazo hafainganam-pandeha kely ianao, saingy mila mahay miakatra 30% mitongilana ary mitazona ilay zavatra mihetsika.
Ka tiako ny mampiasa 53/39 eo aloha ary 11/28 any aoriana ho an'ny ankamaroan'ny vanim-potoana. Manome ahy ny bandwidth rehetra ilaiko izany. Matetika ny olona miteny hoe, oh mihanika ianao, maninona ianao no tsy mampiasa boaty matevina na kely kokoa? Fantatrao, ho ahy ny hevitra dia ny miakatra haingana amin'ireo havoana ireo, haingana be, ka ilay 39 dia manome ahy ny zavatra ilaiko rehetra mba hitazomana ny bisikileta.
Mahavariana fa nametraka «compact» 50/34 ho an'i Taiwan aho. - Marina. - Satria fantatro fa hanana andro sarotra ao amin'ny lasely aho.
Ary aorian'ny 80K dia hanao izany isika. Alohan'ny nahatongavako 30% hirona, nametraka iray compact ho azy aho. - Betsaka amin'ireo matihanina hafa koa ve no ao anaty compact? - Tao anaty compact daholo. (mihomehy) Ny ankamaroan'izy ireo dia ny 32 any aoriana ihany koa - Wowzers, wowzers, toa tranga sarotra tokoa izany.
Ny Selle Italia SLR, nahoana no nisafidy an'ity lasely ity ianao? - Ka afaka nampiasa lasely maivana kokoa aho izay milanja 100 grama raha misy lasely 50, 60 grama. Zava-dehibe amiko ny mahazo aina. Heveriko fa raha mahazo aina sy miorim-paka tsara aho dia afaka mametraka hery bebe kokoa amin'ireo pedal.
Ka ny Selle Italia dia miasa tsara ho ahy. Zavatra iray nampiasako hatrizay. Tsikaritrareo fa azoko lavitra be io - eny - ary izany tokoa no entina mandroso amin'ny toerako amin'ny bisikileta mba hahafahako manome hery kely kokoa.
Mety tsy izany no toerana tsara indrindra mandritra ny fotoana maharitra, mitondra fiara tontolo andro, hazakazaka amoron-dalana, fa tsy manao an'izany aho. Tiako ny fampisehoana farany avy amin'ny bisikileta, ka mitaingina azy mandroso rehetra aho.- Ie, tsara be izany tsy fantatrao, tsy mahafoy ny zava-bitanao ianao, mbola maivana be ihany, fa bisikileta tena mandeha io.
Satria mpihanika marobe ary nanao izany koa aho, ary mety tsy hanao izany intsony aho, saingy notapahinay avy tany amin'ny bisikiletako ny rotsako, saingy mbola manana ny rotsakorinao koa ianao. - Tena ataoko ho mariky ny voninahitra ity. Tsy mbola nametraka hacksaw tamin'ny bisikiletako mihitsy aho.
Tsy mbola nanao an'izany aho nandritra ny taona maro nandehanako. Ary nahavita nandresy fiakarana havoana vitsivitsy aho nefa tsy nanapotsitra ny rano nilatsako, ka tsy hanao izany mihitsy aho. Nanaiky nesorina ny fantsom-by aho, tsy haiko raha misy fiovana.
Nefa eto io, toa misy fiovana amiko. - Manantena aho fa nahaliana anao ity fijerin'i bisikileta Dan ity ary raha izany dia omeo ankihibe izy ary aza adino ny misoratra anarana amin'ilay fantsona. Ary ny fahitana an'i Dan mihetsika amin'ny SystemSix-ny, ary na dia tsy nampihena azy aza izany dia azonao jerena ao amin'ny lahatsoratra mitondra ny havoana mideza indrindra eto an-tany amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana ao amin'ny SuperSix.
Cannondale SuperSix Evo Carbon ve?
nyCannondale SuperSix EVOmanana maivana, manintonakarbaonaframe izay aerodynamika miaraka amina fantsona aerofoil voahidy.
Inona no dikan'ny Hi-Mod?
nySalama-AMIN'Idia fefy henjana izay mamaly bebe kokoa rehefa manitsaka ny pedal ianao. Ny varotra dia tsapanao fa manjavozavo bebe kokoa eny an-dalana. Ny hevitro fotsiny. Mila mitaingina frame roa ho anao ianao. Fahendrena, mety mitahiry 200grams mahery eo amin'ny frame fotsiny ianao.
Ireto misy gliosida. (mihomehy) - Oh, misy gliosida ve? - Toy ny bera gummy. - oh ahoana ny hevitrao? Rivotra? (mozika mahery) (mikiakiaka) Hey, Sarah Moore no anarako ary eto amin'ny tokotaniko any Squamish, British Columbia izahay.
Ary maka sary an-tsaina ilay fitsapana an-tsaha ny bisikileta mavokely izahay. Ary miaraka amiko eto izao ny Cannondale Scalpel. Miaraka amin'ny fivezivezena fampiatoana zato milimetatra ary forkara fampiatoana milimetatra.
Ny Cannondale Scalpel dia bisikileta tsy azo iadian-kevitra. Ny bisikileta rehetra afa-tsy ny habeny kely dia misy kodiarana 29 '', ary avy eo ny habe kely dia misy 27 ary ndao hojerentsika akaiky kokoa ny frame Cannondale Scalpel ananantsika eto. Ho an'ity kinova ity, ny ekipa mpamorona Cannondale dia namolavola ny rafiny fitaovam-pitehirizan'izy ireo manokana ao anaty frame izay mora esorina.
Ary avy eo misy ny Dyna-Plug, plug-n'ny kodiarana mahery vaika izay mifanaraka tsara koa ao amin'ny kitapo fitahirizana. Ary misy koa ny CO2 izay mifanentana eo. Ary raha sarotra loatra aminao izany rehetra izany, misy takelaka poakaty ihany koa apetraka fa tsy misy fantsona ao anaty fantsona, mandehandeha amin'ny alàlan'ny bisikileta iray manontolo ny telegrama mba hahatonga azy io ho tony sy mora kokoa hiasa, ny hidration no ilaina ary misy toerana roa ho an'ny tavoahangin-drano eo afovoan'ny Cannondale Scalpel.
bisikileta bilety walton
Miaraka amin'ny fito fito dia mitaingina ny salantsalany habe aho, izay mahatratra 435 milimetatra. Izany dia ampifandraisina amin'ny tsanganana 60-millimeter, ary ny halaviran-kodia dia 1,151 milimetatra ny halavany. Miaraka amin'ny zoro lohan-doha 68 degre.
Ny scalpel vaovao dia iray degre sy sasany fisaka kokoa noho ny teo aloha. Ny scalpel dia manana zoro fantsom-pandraisana seza 74 sy 74 antsasak'adiny, izay mifanaraka amin'ireo bisikileta hafa amin'ity sokajy ity. Ary manana diamondra milanja 436 milimetatra amin'ny habe rehetra.
Ary izao dia milentika any amin'ny fampiatoana antsika. Amin'ny ankapobeny, i Cannondale dia te hampiasa fampiatoana Horse Link, saingy tsy tian'izy ireo daholo ny pivots sy ny fitaovana ary ny lanjany fanampiny izay miaraka amin'ity endrika ity. Fa kosa, io ampahan'ny famolahana karbaona io dia mihetsika toy ny pivot, izay nolazain'i Cannondale fa nitahiry 200 grama teo ho eo izy ireo.
Miaraka amin'ity famolavolana fampiatoana ity, Cannondale dia afaka nihazona ny lanjan'ny endriny. Nambaran'izy ireo fa ny haben'ny Medium dia milanja 1,910 grama. Ary ny haben'ny habeny mitaingantsika dia tsy misy fantsom-batana miaraka amin'ny kodiarana mifehy, tsy misy pedal ary nesorinay ilay fitaovana fehiloha.
Latsaka ny 22 kilao fotsiny. Ny bisikileta fitiliana anay dia miaraka amina haingam-pandeha ao ambadiky ny Fox float DPS ary milimetatra sisa tavela Ok, ka nahatonga azy io ho iray amin'ireo bisikileta mihombo kokoa eto. Ny zavatra rehetra amin'ny maodely rehetra amin'ity bisikileta ity dia vita amin'ny karbaona.
Manomboka amin'ny $ 4,500 ny vidiny ary tafakatra 12000 $. Ny maodely sedrainay dia ny Cannondale Scalpel avo Mod, Ultimate. 12000 $ ny vidiny ary amin'izany vola izany dia azonao ny Strands of Eagle Axs, MV Wheels, ary azonao ny Level Ultimate Brakes.
Ampy izay ny momba ilay masontsivana. Andao hiresaka momba ny fahatsapana $ 12000 eo amin'ny lalana (mozika) - Tsara izany. Andao hiresaka momba ny fihetsiky ny Scalpel vaovao amin'ny lalana.
Fa tsy maintsy hikarakara ny fanamboarana aloha izahay. Manana kodiarana Schwalbe Control isika, mazava ho azy, toy ny amin'ny bisikileta rehetra. Fa i Sarah, lazao ahy ny fampiatoana ahy - Niorina tamin'ny alàlan'ny tolo-kevitr'i Cannondale aho, mora be.
Misy taratasy kely apetraka eo aloha sy aoriana, ary avy teo no nitohizany. - Miresaka momba ny alohan'ilay bisikileta. Lazao ahy ny momba ity lehilahy tànana havia ity.
Miandrasa marina, aza tantaraina amiko ny tànana havia, ny tiako ho fantatra dia izay no noeritreretinao voalohany rehefa hitanao. Eny, fantatro fa manana tantara lava izy io, voaporofo sy marina, fa rehefa vao hitanao ilay bisikileta dia mieritreritra ianao hoe: 'Oh, inona no ho fahatsapana rehefa mandeha amin'ny bisikileta aho? Hanaraka? ' Mety? - Ie - hahatsapa ho diso ve aho? Ka - rehefa mieritreritra an'i Cannondale ny olona dia matetika no mieritreritra tànana havia, - tanteraka. - Saingy misy sary lehibe kokoa noho izany.
Ary izany no horesahintsika. Andao hiakatra aloha. (mozika mangina) - Mbola fantatrao ihany, zoro fantsom-boalavo manidina kely, ny bisikileta dia mahatsapa fa tena mamaly, mora be ny mankafy ny rivotra eny an-joron-trano.
Tsy mila mieritreritra ela ianao. Ary rehefa mijery ny teknikan'ny fiakarana ianao dia ampahany lehibe amin'izany ny fihazakazahana, fantatrao - Marina.- Inona no mahatonga ny fiakarana ara-teknika mora kokoa na sarotra kokoa.
Ary ny Cannondale dia manana tanjaka mahavariana amin'ireo fiakarana - andao ampitahaina amin'ny Lux, ny Canyon Luxe, amin'ity lafiny ity. Inona ny hevitrao? - Ie, tena mahaliana satria tiako holazaina fa bisikileta vaovao ity. Vao nivoaka izy io.
Tsy dia mahatsiaro tena loatra ny mitondra fiara miakatra, toy ny afo - tsy tianao ny mitsambikina haingana, marina. - Ie, tsy mandroso izany. Tsy misy an'izany, fantatrao, ny fahatsapana mafy izay antenainao amin'ny bisikileta hiampitana.
Tahaka ny saika antenaina handondona anao amin'ny fiakarana ianao, saingy noho io, eny, tsy dia mahatsiaro ho toy izany ianao. Azonao atao fotsiny ny miteny hoe mipetraha ary, fantatrao, miova ho fitaovana ambany kokoa, mitahiry angovo kely. Mety tsy hahatsapa ho mahomby izy io, nefa mahomby ary mora kokoa ny miakatra sy mandalo fizarana taktika.
Amiko dia toy ny teo amin'ny Canyon na bisikileta hafa izany toa hitanao hoe: 'Oh, marika iray aho - tsy maintsy ataonao izany.' Fantatrao? Ianao dia iray amin'ireo mahatratra. - Ie, fantatrao.
Io bisikileta io dia hojereko, ary ianao, mipetraka ary mandeha tongotra ianao ary mitaingina fotsiny, Mwa, ireo zavatra ireo. - Eny eny. Toy ny toerana misy anao.
Somary somary eo an-tampon'ny bisikileta ihany ianao ary toa tsy manana ny zava-drehetra ianao ary manantena ny zavatra tsara indrindra hahavitana azy. Mety? Ie, azonao atao tsara ny mamono azy, mitsoka azy - mitsentsitra izany. - Aleo koa tadidio fa ny bisikileta rehetra dia mitovy tanteraka ny kodiarany, miaraka amin'ny tsindry kodiarana mitovy tanteraka.
Noho izany dia esorinay any io fiovaovana io, izany hoe fampiatoana mamela heloka kokoa izay manome ampahany betsaka amin'ny hery ho an'ny bisikileta amin'ny hazakazaka amoron-tsiraka na dia eo aza ny fametahana tsara.
Ary azo antoka fa manampy amin'ny fiakarana ara-teknika izany. Sa tsy izany? - Ie. Tena zava-dehibe. (mozika mangina) Ie, ka andao aloha hiresaka momba ny fahaiza-mitarika sy ny géometry.
Betsaka ny toerana mety tsy ahadisoana amin'ity bisikileta ity. Tsy toy ny mamakivaky ny tantely isaky ny zoro izany, ary-- Nahatsapa ho nahazo aina ianao. Tsara kokoa ianao, azo antoka izany - Eny.
Azo antoka fa mahazo aina bebe kokoa ianao amin'ny fiaviana - nahoana ianao no mieritreritra fa toy ny faritra misy roody io ary mety mihalefaka kely amin'ny bisikileta toy ny Cannondale izay tsapanao fa hanavotra azy na mahatsapa ianao fa tsy matahotra ianao mihitsy. - Ie. Heveriko fa tena momba ny toerana misy anao ambonin'ilay bisikileta io.
Amin'ity bisikileta ity dia toa somary milamina ianao izao. Tsy dia avo roa heny ny haavony noho ny an'ny Canyon Lux - raharaha lehibe izany - eny, mitondra fiovana lehibe izany. Noho izany dia tena tsapanao fa eo amin'ny toerana tsara kokoa ianao raha mbola afaka mitazona ny fihenan'ny kodiarana eo aloha - io famaky io dia eo alohanao.
Tsy mahatsapa ianao hoe mivoaka ny varavarana fidirana - eny, tena marina. - Manohitra ny sitrakao. - Ary na izany aza, fantatrao fa tsy misy lahatsoratra mitete, toy ny hoe mahatsapa toerana tsara ianao - Toa izao - toa manana fahatsapana bisikileta bebe kokoa, ary fantatro fa marina any Canada.
Izao misy miteny hoe: 'Oh, fantatrao, ity no bisikiletantsika' - Ie. Azo antoka fa tsy matahotra ianao rehefa eny an-dalana hidina. Manana efitrano kely kokoa ho an'ny rivotra fotsiny izy io. - Ahoana ny amin'ny faran'ny dia hafa.
Raha mamela izany. Nahatsapa ve ianao fa ianao io? hipetraka be loatra amin'ity kapoka ity na - tsia- Midika izany fa tsy misy ny famoahana sarotra. Tsy mbola nahatsapa izany fahatsapana izany aho, fantatrao, tena lalina tamin'ny dia aho.
Ie. Fomba mety fotsiny hampiasana ny dia fampiatoana mahomby sy tsara io. Rehefa miresaka momba ny fampiatoana isika dia tsy misy fomba tsy ahafahantsika miresaka momba ilay zavatra fork strut sisa.
Ka hafahafa izany, Sarah. Fantatro fa nanana famandrihan-toerana vitsivitsy ianao tamin'ny voalohany, saingy efa nitondra an'ity zavatra ity ianao nandritra ny herinandro maro. Inona ny tantara? Ahoana ny fomba fiasa? - Mahafinaritra ny fahatsapana. - Mahitsy? Mahatsiaro ho toy ny fork. - Mahatsiaro ho be kitro ilay izy.
Ie - Ka raha tsy nijery ambany ianao dia ho fantatrao ve fa tsy fork Fox na RockShox? - Tsy hanana hevitra ianao - Izaho koa nitondra ilay havia havia. Ary nanoratra aho nanoratra ny CID vaovao, nanoratra 32 sy 34 ary ny zavatra strut ankavia aho. Hentitra tsara io.
Tsy olana io. Holazaiko fa mety ho iray amin'ireo forks Xc mafy hatoka any. Ie.
Mahatsapa-- Mahafinaritra, sa tsy izany? - Toy ny tsy nanananao hevitra, ohatra, ny tsy fanananao fork mahazatra eo. - Marina indrindra. Araka ny hevitrao, inona no maha-zava-dehibe ny hamafin'ny fork amin'ny fikirakirana ny bisikileta? Fantatrao, hoy hatrany izahay fa io angamba ilay forkana fiampitana henjana indrindra eny an-tsena izay azo antoka fa manampy ny bisikileta handeha haingana kokoa amin'ny tany mikitoantoana. - Ie.
Azo antoka fa tsapanao fa mifehy bebe kokoa amin'ireo fidinana ianao. Fantatrao fa tsy mahatsapa mahia mihitsy ianao. Fantatrao, hiteny aho noho ny zavatra haingam-pandeha, tsikaritrareo fa mijoro kely ambony ambonin'ny moto ianao.
Tsy izany. Mazava ho azy fa tsy noho ny fork, fa amin'ny ankapobeny, - The geometry.- Noho ny geometry dia mahatsiaro ho ambony ianao, koa.- Angamba tokony hampidina ny seza ianao, Sarah.- Eny. - Tena avo izy io. - Indrindra satria tsy misy dropper io. (mozika upbeat) - Ny bisikileta hazakazaka an-tanety dia saika hanohitra ny famantaranandro.
Nanana ny famantaranandronay manokana izahay. Sarah, nanao ahoana ny fizotran'ny scalpel vaovao tamin'ny famantaranandro? - Ie. Izy io dia nanana fotoana haingana indrindra tamin'ny feny ankapobeny sy tamin'ny fiakarana ary avy eo dia nifandray tamin'ny Cannon Lux, izay misy tsiranoka mitete eo amin'ilay fidinana.
Fampitahana mahaliana - eny. Eny ary, mazava ho azy fa nanana ny fitsapana fahombiazana ihany koa isika izay nametraka azy teo afovoan'ny afovoany, 10 segondra ao ambadiky ny mpandresy (mozika maneso) Sarah, ohatrinona ny vidin'ity bisikileta ity? - 12 000 $ ny vidiny - Misy zavatra hafa tokony hatao ve? Fanatsarana? - Tsia, manana ny kodiarany MV, Depost, - Fehin-tànana havanana, hazavana lehibe izaitsizy. - Entana maivana sy haingana.
Misy olana amin'izany? - Tsia. Tsy misy mihitsy. - Nandeha izany. - Ka nanana boaty boaty kely koa ianao tao.
Inona ny hevitrao? - Tiako ny axis. Ny tiako holazaina dia tsara be rehefa miasa mafy ianao dia afaka mandeha fotsiny. Bloop, bloo, bloo.- Te hiresaka momba ny kasety any an-damosiko aho, ity ilay kasety vaovao misy sakany 52-nify.
Inona ny hevitrao? - Holazaiko fa ny fiampitana firenena dia mety tsy ny toerana tsara indrindra ho an'ireo nify 52 ireo. Satria satria toy izany ny fifandraisanareo dia lehibe tokoa ny filatsahany. Toy ny hoe tena miasa mafy ianao ary te hanamora ny fitaovanao iray ary tampoka eo dia mihodina fotsiny ianao. - Etsy ankilany, bisikileta fifaninanana ity.
Tsy tokony ho ao amin'io vala-nify 10 io foana ve ianao. - Mazava tsara. - Okay.
Andao izao hiditra amin'ny lafin'ny tsara sy ny maharatsy. (mozika faly) Okay. Amin'ny tombony sy fatiantoka.
Sarah, lazao amin'ny olona izay tianao. - Eny, tsy bisikileta io, saingy mahatsapa tena ahazoana aina kokoa, fifehezana bebe kokoa noho ny bisikileta maro hafa, fahatsapana fampiatoana mafy. Azonao atao ny mitondra fiara toy ny hazakazaka lava be na elanelam-potoana iray andro na izay tianao atao. - hazakazaka an-tsehatra. - Ie, ary tsy ho nokapohina fotsiny ianao.
Noho izany dia malama kokoa sy mamela heloka kokoa izy io. Tena tiako koa ilay lasely Prologo tonga amin'ity bisikileta ity. - Hafahafa izany. - Mahatsiaro ho tsara.
Tsy maninona izay fisehoany. Mipetraka eo amboniny ihany ianao. (mozika faly) - Okay, ny lafy ratsy manaraka.
Sarah. Lazao amin'ny olona ny zavatra tsy tiany. - Eny, mbola tsy nifanaraka tsara tamin'ny bisikiletako mihitsy aho tamin'ny alàlan'ny familiana.
Ka izany no zavatra heveriko fa azo hatsaraina, fantatrao, bisikileta somary ambany sy lava kokoa. Raha tena tianao izany, fantatrao fa mahatsapa tena mahomby amin'ny fiakarana ianao dia tsy manana an'io bisikileta io. Ka kitiho fotsiny ny bokotra lockout kely ary azonao atao ny manamboatra an'io bibikely io - ka raha te-hamono ny fampiatoana anao ianao, hoy izy dia tsindrio fotsiny ilay leveram-baravarana.
Andao handeha - eny. (mozika maneso) - Mety tokony hiresaka momba an'iza ity bisikileta ity no tokony horesahintsika, sa tsy izany? - Ie. Midika izany fa ho lasa hazakazaka amerikana maoderina ity.
Raha mitaingina lalana ara-teknika bebe kokoa ianao dia ho bisikileta tsara ho anao izany. - Ahoana ny amin'ny hazakazaka an-tsehatra? Ny zavatra toy izany - eny. Ny tiako holazaina dia satria mamela be ilay bisikileta, tsy ho voa mafy ianao amin'ny hazakazaka lava kokoa.
Ka raha mihazakazaka hazakazaka mandritra ny andro maromaro ianao na manao hazakazaka adiny efatra fotsiny dia ny hazakazaka hazakaza-tsoavaly toa ity dia mety ho bisikileta tsara hanaovana zavatra toa izany. Ary eo ianao no manana azy. Izany no scalpel Cannondale, miaraha mijery lahatsoratra bebe kokoa amin'ny fitsapana ny sahan-tsika ary latabatra boribory izay ampitahainay amin'izy rehetra. (Mozika faly)
Bisikileta tsara ve i Cannondale SuperSix Evo?
Famaranana. Amin'ny ankapobeny, ny vaovaoCannondale Supersix Evodia haingana sy mahazo aina kokoa noho ny teo alohany. Hazakazaka matotrabisikiletanandresy ireo dingana fitsangatsanganana lehibe, ka fantatro fa tsy hahasakana ahy izany rehefa manenjika PRs na hazakazaka. Saingy noho ny fampiononana nohatsaraina, mahavita zavatra betsaka kokoa.02.24.2021
Ny Cannondale Super Six Evo no bisikileta hazakazaka manodidina an'i Cannondale. Azo alaina ao anaty kinova fameren-tsofina sy makirana, azo alaina ao amin'ny Ballistec Carbon sy High Mod Ballistec Carbon koa ny frame, izay midika fa bisikileta tena mahomby izy io amin'ny vidiny rehetra. Izy io dia bisikileta mitady, maivana ary maivana indrindra izay tena mety amin'ny mpitaingin-tsoavaly mahazatra sy amin'ireo atleta Tour de France.
Ao Cannondale dia bisikileta ihany no ataontsika ary izany dia ho anao mpitaingina sy ny ekipan'ny Tour de France iray manontolo, noho izany dia mila bisikileta faran'izay mahay izahay, ka izany no mahatonga ny Super 6. Manana fananana aerodynamika toy ilay efa fohy ny fomban'ny Aero. ary koa ny fanaovan-jiro hazavana sy haingam-pandeha haingam-pandeha. Speed ​​Save dia hahatonga ny bisikileta hilamina kokoa amin'ny tany tsy mitovy, dia tena hitanao fa tena mpihazakazaka rehetra eo ambanin'ny fefy io.
Ny seza seza 25,4mm, izay manify indrindra, dia mitaingina aina kokoa ao anaty lasely, ary ny fork iray tsy manam-paharoa dia miantoka fa maivana tokoa ilay fork ary afaka mahazo ilay fampiatoana mitovy amin'ny kodiarana any aoriana. Atambaro izany amin'ny downtube faran'izay mafy sy ny fonosana BB30a ambany ary manana ny bisikileta fihanihana lafatra ianao.
Ho hitanao ao koa ireo fitaovana roa samihafa, ny Cannondale Ballistec sy ny Cannondale Ballistec High Mod. High Mod dia manondro kinova mahery an'ny frame, rafitra nohamafisina manerana, izay midika fa afaka mitondra anao ny fiara mitondra anao ihany fa ny lanjany kosa. Hahita andiana vondrona misy 105 hatramin'ny Dura amin'ireo bisikileta ireo ianao. miaraka amin'ny Ace ambony sy SRAM mena ambony.
Ny ankamaroan'ireo bisikileta ireo dia misy cranks marika Cannondalesown ihany koa. Cannondale dia nanao crank efa ho lava raha mbola nanao bisikileta izahay, ary misy cranks telo ao amin'ilay faritra. Ny cranket Cannondale SI dia crankset sandoka 105 hamelezana, miaraka amin'ireo cranks roa manaraka dia cranksets hologramantsika malaza, ireto dia cranks aluminium misy lavaka miaraka amin'ny crank TopCannondale SI SL 2 izay mbola asa-tanana any Etazonia.
Ireo cranks ireo dia manolotra naoty henjana tsy azo oharina amin'ny lanjany, ary satria i Cannondale manao azy ireo ivelan'ny-boaty fa tsy mila mividy azy ireo, dia azontsika atolotra azy ireo amin'ny vidiny mahery setra tokoa. Tsy mila miahiahy momba ny fanavaozana ny bisikiletanao amin'ny ho avy ianao, na dia ny bisikileta mekanika aza manana fantsom-pifandraisana ivelany, miaraka amin'ny tariby voafintina hanomezana tombony aerodynamika anao, ny bisikileta misy di2 sy SRAM dia manana ampahany azo esorina amin'ilay fantsona midina izay mamela anao Hivezivezy eo anelanelan'ny tarika misy anao ary tsy mampiseho fonosana tariby ratsy tarehy intsony. Ho an'ny kinova kapila an'ny Super 6 Evo tianay homena ny mpitaingina môtô freins tsara kokoa, toa ny hazakaza-tsoavaly ihany no handeha amin'ny disk, ary alohan'izay dia mbola azonao atao ihany ity bisikileta ity ho toy ny hazavana, haingam-pandeha, klioba na fanatanjahantena. bisikileta.
Amin'ny fanovana ny frame ho disk dia tsy tianay ny hahavery ilay kalitao mitaingina Super 6 Evo malaza. Na izany aza, tamin'ny fampidirana 77 grama fotsiny ho an'ny endriny ao amin'ny kinova High Mod, dia notazoninay ny maivana maivana Super 6 malaza. Ny fork dia novaina ho rafitra 12mm bolt mba hitantanana tsara kokoa ny hery ateraky ny kapila, fa ny kodiarana any aoriana kosa dia mitazona famoahana haingana 9 milina mba hitazomana ny lanjan'ireo velaran-tariby izay midika fa afaka mamorona bisikileta miaraka amin'ny UCI izahay. fetra farany ambony 6.8 kg.
Hahita kodiarana isan-karazany ampiasaina amin'ny Super 6 Evo ianao, amin'ny vidiny fanokafana dia ho hitanao ny kodiarana Mavic, singa vita amin'ny aliminioma, efa nosedraina sy nosedraina nandritra ny taona maro izy ireo ary tena azo antoka nefa kodiarana maivana azonao atao tsara mihazakazaka. mitondra fiara. Eo an-tampony dia ho hitanao ny kodiarana karbaona Enve avy amin'ny marika Hologramm Mavic sy Cannondale. Ireo kodiarana rehetra ireo dia hitondra ny fiainana ho maivana miaraka amin'ny lanjany maivana, haingam-pandeha ary traikefa nahafinaritra mahafinaritra.
Raha sasatry ny misafidy amin'ny bisikileta miakatra, bisikileta sprint, aerobike na bisikileta hafa ianao ary maniry bisikileta an-dàlana tena tsara afaka mahavita azy rehetra, dia mety ho anao ilay Super 6 Evo. Ao amin'ny kinova famaranana dia manome tahan'ny fampisehoana vidiny tena tsara izy io mba ahazoana ny endriny mitovy amin'ilay nitaingenan'ny zalahy antsika tao amin'ny Tour de France, amin'ny fananganana kapila dia manome lalana maivana sy tena ahazoana aina, haingam-pandeha na bisikileta Sport. . Bisikileta tena be dia be izy io ary malaza be amin'ny olona te-hiasa amin'ny bisikiletany manokana ary tsy mila haitao manan-danja sy endri-javatra sarotra, mila maivana be izy ireo, mamirapiratra amin'ny bisikileta manodidina rehetra.
Bisikileta tsara ve ny SuperSix Evo?
Ny taranaka fahateloSuperSix EVOdia tsara boribory tsara tarehybisikileta: maivana, mahazo aina ary ankehitriny miaraka amin'ny tweets aero. Izany no mahatonga ny làlantsikaBisikiletany taona.20.03.2020
Mahazo aina ve i Cannondale SuperSix Evo?
Famaranana. Amin'ny ankapobeny, ny vaovaoCannondale Supersix Evodia haingana sy bebe kokoaainanoho ny teo alohany. Môtô hazakazaka matotra izay nahazo dingana lehibe amin'ny fizahan-tany, noho izany fantatro fa tsy hahasakana ahy izany rehefa manenjika PR na hazakazaka. Saingy noho ny fanatsaranaAmpionòny, mahavita zavatra betsaka kokoa.
Tsara ve ny Cannondale SuperSix EVO?
nySuperSix EVOCarbon DiscUltegrakoa dia iray amin'ireo maodely lafo vidy indrindra amin'ny laharana Bike of the Year amin'ity taona ity (izay mifantoka amin'ny bisikileta eo anelanelan'ny? 2.500 sy? ​​4,000), na dia manao toy nyTSARA, raha tsy tsara kokoa, noho ny bisikileta misy grand extra amin'ny vidiny, ka vao mainka mendrika dera avo.
Haingam-pandeha ahoana ny Cannondale SuperSix Evo?
Araka ny angon-drakitra tononkirany, ilay vaovaoSuperSix EvodiaHaingankaingananoho ny teo alohany tamin'ny sisin-tany tsara 30 watt kely kokoa hisintona amin'ny 30mph (48kmh).02/14/2020
fanatanjahan-tena baolina ab
Inona ny atao hoe Cannondale Evo?
Ilay vaovaoSuperSix EVOdia fivoarana mahafinaritra an'ny milina hazakazakantsika mahazatra. Notehirizinay ny lanjan'ny maivana sy ny fikirakirana telepathic an'ilay kinova taloha nahazo loka, ary nanamafy ny helo tamin'ny zavatra hafa rehetra. Malemy kokoa, mahavita kokoa ary betsaka, haingana kokoa - namboarina hisidina izy io.
Karazana bisikileta inona ny Cannondale Supersix?
SuperSix no bisikileta mandeha amin'ny alàlan'ny karbaona an'ny mpamokatra bisikileta amerikana Cannondale. Misy 4 ny fananganana Cannondale SuperSix 2013. SuperSix dia manana endrika mitovy amin'ny bisikileta an-dàlam-pandrosoana any Cannondale SuperSix Evo: fipetrahana seza ora iray ihany, fipetrahana BeatBox BB iray ihany.
Firy ny kapila karbonin'i Cannondale Supersix Evo?
Ny anton-javatra iray hafa misy ifandraisany amin'ny fampiononana dia ny geometry izay novain'i Cannondale tamin'ity fahatongavan'ny SuperSix Evo farany ity. Araka ny voalaza dia nitaingina modely 58cm aho. Ny kinovan'ny bisikileta tamin'ity taona 2019 ity dia nisy 58,4cm ary nahatratra 39.9cm, noho izany ny 1.46 no tambatra / ahatongavana.
Karazan-joro inona no ananan'i Cannondale?
Ny fampiarahan'i Cannondale lohan-doha 73 degre sy zoro fatratra 72.9 degre, lalan-kely misy kodiarana 1,005mm, lalana 58mm amin'ny forkana maivana sy chassis henjana dia mametaka bisikileta izay mitantana toy ny hazakazaka hazakazaka tokony hatao. Ny SuperSix EVO Carbon Disc Ultegra dia misy ihany koa amin'ity famaranana volamena ity.